Abazobi beemephu abanabuchule bokwenza izinto? -Geofumadas
Ikhaya/GIS asibonise/Abadwebi bamaphepha-mapafa abanalo ubugcisa?
Kubonakala ngathi abazobi beemephu abangooyilo bemifanekiso emibi kuphela kodwa ikwangabanyangi abakhohlakeleyo. Kuyo yomibini le mizekelo, imeko ye asibonise kwinguqulo 7 kubonakala ngathi usebenzise iiwindows clipart kwaye watshintsha imibala kuphela. Into embi kukuba i Titans yaseTennessee
Kwimeko Microstation uphawu Bentley Systems, kwenguqu yayo ye-8, wasebenzisa umfanekiso oqulunqwe njenge-V8, njengamajusi e-Blends :), ngokwahlukileyo ukuba i-V8 ayikho i-clipart, uphawu lokuthengisa olubhalisiweyo lwe-Blends.
Iimephu zoMculo, umculo ophezulu ngelizwe
Blog Ingenieria.com iyazalwa
Kuhle ukuvuma, into embi ayikunikezela kwaye ufuna ukwenza konke
Kwinto ethile singabazobi beemephu kwaye asiyiyo ngqo imizobo, ukuthengisa kunye neenjongo….
Ngoko yeah, masithi ukuba abaphuhlisi uthathe iintsuku yonke emva ikhowudi yokuthatha isicelo irobust ezongeziweyo, kunye nentengiso bokuyila (ukuba unalo) kuthatha iiyure ezimbini ukwenza umfanekiso corporate
Umntu, kunokugxeka abadwebi beemifanekiso, uya kuwuphonsa kumaSebe okuthengisa grafón ukuba ezi logo zisebenzile, nangona owesibini unyanzelekile (v8 kubonakala ngathi yinto eqhelekileyo kum ukuba ndicinge ngokukopa) eyokuqala ivela encwadini 😛